Sida loo nuqul DVD-ga la ilaaliyo
dayactirka bios[emailka waa la ilaaliyay]
1 Aaladaha lagaga saarayo ilaalinta DVD-ga Daaqadaha
1.1 Qalabka DVD43
3 Barnaamijyada lagu koobiyeeyo DVD-ga la ilaaliyo ee Windows
4 ImgBurn barnaamijka
5 BurnAware Free Program
Haddii aad raadinaysay hab aad ku baxdo koobiyayso DVD la ilaaliyo oo xataa sidaas kuma aadan guuleysan, waxaad gaartay blog-ka muujinaya. Sababtoo ah maanta waxaad ogaan doontaa barnaamijyada lagama maarmaanka u ah si taas loo gaaro, laga bilaabo qalabka inta badan loo isticmaalo Windows si loo baabi'iyo ilaalinta uu leeyahay DVD-ga.
Si la mid ah, waxaan ku xusi doonaa barnaamijyada aad isticmaali karto si aad nuqul ka sameysid marka aad ka saarto ilaalinta. Sidaa darteed, ha sugin in ka badan oo wax akhrinta sii wad, si aad ugu dambaysta u ogaatid sida nuqul ka mid ah DVD-ga la ilaaliyo.
Aaladaha lagaga saarayo ilaalinta DVD-ga Daaqadaha
Markuu tixgeliyey arrintaas nuqul ka mid ah DVD-ga la ilaaliyo Ma aha hawl sidaas u fudud, waa in aad ogaataa in haddii aad isticmaasho tignoolajiyada aad samayn karto. Sababtoo ah hadda waxaa jira dhowr qalab oo aad ku isticmaali karto Windows si aad uga saarto ilaalinta DVD-gu leeyahay.
Tani aad bay muhiim u tahay inaad xisaabta ku darto, maadaama ay tahay tallaabada ugu horreysa ee ay tahay inaad raacdo si aad nuqulka u sameyso. Nasiib wanaag adiga iyo si loo fududeeyo habka, hoos, waxaan ku xusi doonaa qalabka inta badan la isticmaalo.
Sidan oo kale, waxaad ku garan kartaa iyaga oo aad garan kartaa sida loo isticmaalo marka aad hawsha fulinayso:
DVD43 waa barnaamij bilaash ah oo kuu ogolaanaya inaad si fudud uga saarto ammaanka in badan oo DVD ah. Waa la jaan qaada Windows 2000, XP iyo Windows Vista oo ka mid ah sifooyinka ugu caansan waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Kuu ogolaanayaa inaad furto nooc kasta oo DVD ah.
Waxay isticmaashaa ilo yar oo kombuyuutarkaaga ah.
Si fudud ayaa loo soo dejisan karaa oo loo isticmaalaa, tan iyo markii lagu rakibay kaliya waa inaad gelisaa DVD-ga ciyaarta oo barnaamijku wuxuu daryeeli doonaa furitaanka.
Waxay u shaqeysaa qaabab 32 iyo 64 bit ah.
Habka looga saarayo ilaalinta DVD-ga waxay qaadan doontaa dhowr ilbiriqsi oo keliya.
Waa la jaan qaada mid ka mid ah barnaamijyada loo isticmaalo in loogu beddelo faylasha DVD qaabab kale.
Adiga oo maskaxda ku haya macluumaadkan, raac tilmaamaha soo socda si aad u barato sida loo rakibo oo loo isticmaalo:
Ka gal bogga rasmiga ah ee barnaamijka DVD43 browser kasta.
Marka aad gasho boggeeda guriga, taabo isku xirka soo dejinta.
Ka dib marka la soo dejisto la dhammeeyo, fur ".exe file" oo ka soo bixi doona galka kombiyuutarkaaga.
Daaqad ayaa furmi doonta waxaadna calaamadin doontaa "Run" kadibna "OK".
Ugu dambeyntii, daaqad kale ayaa kuu soo bixi doonta waxaadna dooran doontaa "Next" ka dibna "Finish" waana taas.
Marka codsiga si sax ah loo rakibo waa inaad dib u qalabaynta. Markaad dib u bilowdo, waxaad arki doontaa "weji dhoola cadeyn" oo ku xigta saacada Windows, waxay u dhigantaa astaanta barnaamijka.
Sidaa darteed, mar kasta oo aad geliso DVD-ga ilaalisa ciyaarta gelinta oo taabo astaantan, habka ka saarista ilaalintiisa ayaa bilaabmaya. Ugu dambeyntii, dhowr ilbiriqsi ka dib "Wajiga Dhoola cadeynta" wuxuu isu rogi doonaa cagaar taasoo calaamad u ah in howsha si guul leh loo soo gabagabeeyay.
El AnyDVD Waxay aad ula mid tahay tii hore, marka laga reebo inay leedahay farqi yar oo yar. Laga bilaabo inta badan taas, si aad u hesho, waa inaad bixisaa lacag, si kastaba ha ahaatee, ka hor intaadan sidaas samayn waxaad ku raaxaysan kartaa nooca bilaashka ah 15 maalmood.
Farqi kale oo sidoo kale loo arki karo faa'iido ayaa ah inuu la jaan qaadayo nooca ugu dambeeya ee Windows (Windows 10). Hadda, si aad u soo dejisan karto, kaliya waa inaad raacdaa tilmaamahan soo socda:
Ka soo gal browserka aad dooratay ee ku yaala shabakada barnaamijka.
Markaad ku jirto boggeeda guriga, guji "Download" ikhtiyaarka.
Markaas, fariin ayaa soo bixi doonta oo waxaad riixi doontaa "OK".
Ka dib markii la soo dejintu dhammaato, u gudub faylka la soo degsado ee ku yaal kombuyuutarkaaga oo fur "faylka .exe".
Daaqad ayaa furmi doonta waxaadna dooran doontaa "Haa" kadibna "Waan aqbalay."
Mar labaad waxaad arki doontaa daaqad kale oo waxaad dooran doontaa "Next" ka dibna "Install".
Ugu dambeyntii, marka barnaamijka la rakibo, calaamadee "Close" waana taas.
Kadib marka aad dhamaystirto talaabooyinkan waa in aad computerka dib u furto,markuu dib u bilaabona waxa kuu soo baxaysa daaqada waxa aad ku calaamadin doontaa "Next"kadibna "OK". Astaanta barnaamijka waxa lagu rakibi doonaa agteeda saacada Windows-ka si aad u isticmaashona waxa kaliya oo ay tahay in aad samayso waxa soo socda:
Geli DVD-ga aad rabto in aad ka saarto ilaalinta ciyaarta kombuyuutarkaaga.
Kadib, u gudub astaanta barnaamijka oo ku dhufo midigta.
Hadda, calaamadee "Ka saar ilaalinta".
Dhawr ilbiriqsi ka dib waxaa soo baxaysa fariin oranaysa "Ilaalinta waa laga saaray" waxaadna hubin doontaa "OK" waana taas.
Sidan, waxaad hore u yeelan doontaa Ilaalinta DVD waa la saaray oo aad nuqul ka samayn kartaa adiga oo isticmaalaya mid ka mid ah barnaamijyada aad arki doonto hadhow.
Barnaamijyada lagu koobiyeeyo DVD-ga la ilaaliyo ee Windows
Halkaa marka ay marayso, kaliya waa inaad fulisaa wejiga ugu dambeeya ee habka, kaas oo ah koobbi dvd-ga yaad ka qaaday ilaalinta. Tan, sida qodobkii hore waxaa jira barnaamijyo badan, si kastaba ha ahaatee, waqtigan, waxaad ogaan doontaa laba ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan.
Sidan oo kale, waxaan ku sharixi doonaa tillaabooyinka la raacayo mid kasta oo iyaga ka mid ah, si aad u go'aansato midka aad isticmaalayso iyadoo ku xiran midka kuu fudud:
El ImgBurn barnaamijka Waa mid ka mid ah kuwa ugu badan ee lagula taliyay, sababtoo ah marka lagu daro xornimada, waxay ku habboon tahay nooc kasta oo Windows ah. Sifooyinkiisa ugu waaweyn waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Waxay la jaan qaadi kartaa qaab kasta, ha ahaato DVD, CD, CUE, ISO, iwm.
Waxay leedahay interface fudud oo dareen leh, markaa wax dhibaato ah kalama kulmi doontid isticmaalkeeda.
Ma isticmaali doonto kheyraad badan oo kombuyuutarkaaga ah.
Waxay qaadan doontaa meel yar oo ku saabsan darawalkaaga adag, maadaama uu miisaankiisu yahay 2.92 MB.
Adigoo gacanta ku haya macluumaadkan, hoos ka akhri tillaabooyinka si aad ugu rakibto:
Aad bogga rasmiga ah ee ImgBurn
Hadda riix "Download" ikhtiyaarka.
Ka dib markii la soo dejiyo, u gudub faylka soo dejinta oo fur "faylka .exe."
Daaqad ayaa furmi doonta waxaad gujin doontaa "Haa" kadibna "Next".
Ka dib calaamadee sanduuqa oranaya "Waan aqbalay shuruudaha heshiiska shatiga."
Hadda, 5 daaqadood ayaa furmi doona (mid ka mid ah ayaa raacaya kan kale) oo dhammaantood waxaad dooran doontaa "Next".
Ugu dambeyntii, calaamadee "Dhamee" waana taas.
Sidan ayaad si guul leh ugu shuban doontaa barnaamijka kombayutarkaga waxaana sumaddiisu ka soo bixi doontaa desktop-ka. Hadda, si aad u isticmaali karto inaad nuqul ka sameyso DVD-ga, raac tallaabooyinkan:
Geli DVD-ga aad hore uga saartay ilaalinta ciyaartoyga.
Hadda, fur ImgBurn oo dooro "Create image disk."
Ka dib dooro galka meesha DVD-ga ku jira lagu keydin doono.
Ugu dambeyntii, taabo "Copy disc" waana taas.
Daqiiqado ka dib waxaa soo bixi doonta fariin odhanaysa "Nuqul guul leh". Hadda waa inaad gelisaa saxan maran, fur galka meesha uu ku kaydsan yahay nuqulka DVD-ga oo ku koobbi diskka.
El BurnAware Free Program Waxay aad ugu egtahay kii hore, laakiin waxaad ka heli doontaa nooc bilaash ah iyo nooc lacag ah oo leh hawlo badan. Si aad u rakibto, waa inaad raacdaa talaabooyinkan soo socda oo kaliya:
Geli degelka rasmiga ah ee BurnAware Free.
Markaas, hubi "Download" doorasho.
Marka soo dejinta la dhammeeyo, fur ".exe file" oo ku yaal galka wax-soo-saarka.
Daaqad ayaa furmi doonta oo waa in aad gujisaa "Ok", kadibna "Aqbal" kadibna "Next".
Hadda calaamadee sanduuqa oranaya "Waan aqbalay shuruudaha heshiiska shatiga."
Afar daaqadood ayaa furmi doona (mid baa ku xiga kan kale) dhamaantoodna waxaad dooran doontaa "Next".
Markaas, riix "Install" doorasho.
Ugu dambeyntii, dhamaadka rakibidda, calaamadee "Finish".
Inta lagu jiro habka rakibidda, daaqadaha kale ayaa laga yaabaa inay soo baxaan oo ku weydiinaya inaad rakibto barnaamijyo dheeraad ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan xiisayneynin waad diidi kartaa, maadaama aad isticmaasho BurnAware Free uma baahnid barnaamijyo kale.
Hadda, marka aad dhammayso rakibidda, barnaamijku wuxuu ka soo muuqan doonaa desktop-ka kombuyuutarkaaga. Sidaa darteed, si aad awood ugu yeelatid inaad nuqul ka sameysid disk-kii aad horey uga saartay ilaalinta, waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Ku rid DVD-ga ciyaarta.
Hadda fur BurnAware Free oo dooro "Sawir ISO ka samee darawallada".
Kadib dooro galka uu ku kaydsan doono nuqulka faylka ku jira DVD-ga.
Ugu dambeyntii, calaamadee "Koobi DVD".
Sidii kii hore oo kale, waa inaad gelisaa saxan maran, si aad u koobiyayso faylka lagu soo koobiyay galka la doortay. Haddii xogtani ay kuu caddaatay oo aad hore u garanaysay sida nuqul ka mid ah DVD-ga la ilaaliyo, sii wad akhrinta tan blog.
Previous: post Previous: Sida loo tirtirayo lambarada SIM
Next: post Next: Inta badan codsiyada la isticmaalo si loo abuuro Android Animoji